Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya guuldaro ayay ku sagootisay 2011
Itobiya guuldaro ayay ku sagootisay 2011
Posted by ONA Admin	/ December 29, 2011
Shaki kuma jiro inay Itobiya ka filaysay dhamaadka sanadka 2011 wax ka duwan sidan uu ugu dhamaaday. Kaligii Taliyaha Itobiya wuxuu laba sano ka hor ugu bishaareeyay Wayaanaha iyo kuwa u dhaga nugul in waqti aan fogayn la soo afjari doono halganka shacabka S.Ogadenya ee JWXO ay hogaaminayso.
Sida laga soo wariyay diblomaasiyiinta Mareykanka ee WikkiLeaks uu qoray; Xisbiga Wayaanaha (TPLF) ayaa wuxuu aaminsanyahay in hadaanay ONLF iska qabanin ay uga dhamaatay xukunka Itobiya. Sidaa adrteed; ayay waxay dajisteen qorshe ka kooban qodobo (aan xogtooda helnay) oo ah maaxdii caqliga Wayaanaha. Waxaa loo qoondeeyay miisaaniyad xoogan, waxaana la hawlgaliyay kooxo kala duwan oo loo sameeyay hawlqaybsi oo dunida u kala foofay. Maxay noqotay natiijadii? Hal erey hadii lagu soo koobo waa : Guuldarro.
Gumaysiga Itobiya gaar ahaan Wayaanaha marka ay u dajinayaan Somalida qorshe dhagareed waxay ku dhisaan 3ex tiir oo kala ah;
1- Somalida waaxaan qabiil ahayn ma aaminsana.
2- Somalida mansab aan jirin ayaa loo sameeyaa uu midwalba iska dhex arko.
3- Somalida lacag ayaa loo sheegaa xabadna dhafoorkaa laga saaraa.
Hadaad dib ugu noqoto labadii sanee la soo dhaafay, qorshaha gumaysiga uu ugu talagalay inuu ku soo afjaro halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya wuxuu sidoo kale ku salaysnaa qodobadaa aan soo sheegnay.
Marka laga yimaado dadaalka ay JWXO ku fashisay shirqooladii gumaysiga, waxyaabaha soo dadajiyay fashilka gumaysiga waxaa ugu horeeya aqoon darida gumaysiga ka haysata dabeecadaha shacabka S.Ogadenya iyo siyaabaha ay u dhayalsanayaan heerka wacyiga shacabkeena uu gaadhay ee taariikh halganeedkiisii soo taxnaa labada qarni uu ka dhaxlay. Wuxuu filayay gumaysiga qodobadaa aan soo sheegnay marka la dhaqan galiyo oo si ka badbadin ah loo xayaysiiyo in xubnaha JWXO iyo taageerayaasha halganka oo kala ordaya ay soo buux dhaafin doonaan Jigjiga iyo gegada dayaaradaha ee Bole Adisababa. Waxyaabaha lagu qoslo waxaa ka mid ahaa in ciidanka Itobiya la faray inay dhisan xeryihii ay ku soo xaroon lahaayeen ciidanka JWXO markay isa soo dhiibaan. Sidoo kale Hotelada ayaa qaar la baneeyay. Waxaa halkaa kaaga muuqanay in aanay Itobiya ku talagalin in shacabka S.Ogadenya uu fahmi karo qorshaha gumaysiga.
3ex nin ayaa masuul looga dhigay burburinta halganka iyo soo xareynta xubnaha JWXO iyo Qurbajoogta S.Ogadenya iyo waxay ugu yeedheen dib-u-dajinta CWXO. Waxayna kala ahaayeen; Dr. Shefroow Takle Maryam, Cabdi Iley iyo Ibraahim dheere. Midwalbana wuxuu qaatay jadwal iyo muhiimad gaar ah.
Sheffroow wuxuu qaabilsanaa isku-xidhka Addisababa iyo Jigjiga iyo maalgalinta, Cabdi Iley soo xareynta qurbajoogta iyo kala qaybinta shacabka, Ibraahim dheere isagana inuu dacaayada diiniga ah qaabilo, u xalaaleeyo Hawaarinta iyo intii la socotay dilka ONLF-ta isla markaana uu Jigjiga keeno culumada magaca ku leh bulshada.
Qorshahii la siiyay qofwalba siduu u ahaa ayuu u dhaqan galiyay, KT Meles-na waxaa laga codsaday inuusan 2ba sano qalin iyo warqad is-dulsaarin oo aanu xisaabinin wixii ka baxay iyo wixii u soo xarooday. Labadii sano wey dhamaatay, lacag aan ka yareyn $100-200 million (siday sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo) ayaa ku baxay.
Ugu horeyn xeryihii la dhisay ee la yidhi waxaa soo buuxin dhaafin doona naftood-hurayaasha JWXO laba bilood ka diba waxaa la ogaaday inay ahayd been aan waxba ka jirin oo waa loo fujiyay, ka dib markay soo qaadeen CWXO dagaalo saf balaadhan ah oo argagax weyn ku abuuray ciidankii gumaysiga. Waxaa ku xigay socdaaladii uu dibadda ugu soo baxay Cabdi Iley markii lagu yidhi waa la dhisay jaaliyadahii loogu magacdaray Somalida Itobiya. Isagana wixii qabsaday waa la ogaa. Waxaa ku xigay wufuudii ka socday gumaysiga ee loo soo diray jaaliyadaha Mareykanka oo iyagana ku fashilmay inay beentii loo soo dhiibay ka gadaan 100 qofna. Waxaa ku xigay socdaalkii KT Meles oo filayay in caleemo qoyan lagu soo dhaweyn doono, maadaama laga qaaday malaayiin doolar si loo dhiso jaliayadahii ku soo dhaweyn lahaa qurbaha. Waa isagii ka cararay Oslo ee u baqoolay Copenhagen halkaasoo uu kula kulmay markale kabtii uu ka soo cararay.
Ninka kali ah ee masuuliyaduu qaaday ka soo baxay ee waajibaadkii la saarayna gutay waa Dr. Sheffroow, oo miisanayadii tikidhada iyo jaadka iyo .. iyo .. soo xasiliyay. Cabdi iley isaga riwaayadiisii ayuu weli jilahayaa, kolbana wiilal yaryar ayuu intuu geela ka soo dhex qabqabto ku amraa inay yidhaahdaan waxaan ahayn UBO si loo sii daayo. Ibraahim dheere oo isagana aduun iyo aakhiraba ku seegay (tawbadda way u furan tahaye), raaligalinta Cabdi iley ayaa dhalinyaradii uu khiyaanay ee beenta u sheegay ay maanta dhex taag taagan yihiin Godey iyo Jigjiga oo meel ay tagaan la’yihiin. Waxaa laga wariyay qaarkood inay yidhaahdeen shacabkiina dambi ayaan ka galnay, Ibraahim dheere iyo Nashaad iyo inyaroo la socotana waxay ku mashquulsan yihiin beero iyo guryo.
Gudigii xaaraanta ahaa halkaa ayuu ku dambeeyay.
Gumaysiga Itobiya wuu ogaaday hadda inuu ku guuldareystay qorshihii uu dajiyay. Waxaa kaloo uu gumaysiga ogaaday been badan oo loo sheegayna in aanay waxba ka jirin. Sababtoo ah ONLF iyadoo ka awood badan laba sano ka hor heerkay joogtay ayay gude iyo dibadba ka ahwlgalaan.
Sanad cusub oo guulihiisa xambaarsan Inshaa Alaah ayaan idiin rajaynaynaa.
Abdirahmaan Kaahin says:
Salaanta islaamka ee sharafta leh ka dib walaal, waxaan akhriyay qoraal aad u qiimo badnaa oo aad kaga hadlaysay taariikhda iyo waliba wacyiga geeska afrika khaasatan tan Muslimiinta s/ogadenia ee ay dhibaatada Abbassiniyada mucatab ku dirir ka ahi ku hayso.
Walaal waxaa aad ii qancisay qaabka wanaagsan ee aad marka ugu horaysaba u soomartay in aad dadka qoraalkan akhrisan doona si dhibyar wax u fahamsiiso haday noqoto, arigtida Diiniga ah, tan taariikheed iyo waliba sida ay maanta iyo shalay maanta uga daran tahay xaaladda umadini, Walaal waxaan indhahayga soo saaray waa aan booqday caasimadii islaamka ee East and Central africa (madiinatu Harar) meeshii lagu xabaalay dadkaas faraha badan ee aad sheegtay in lagu laayay xiligii ay Abbassinia qabsanaysay oo aan filayo in ay ku aadanayd 1887 sadex sanadood uun kadib shirkii Baarlin ee ay lagu qaybsaday afrika.
Waxaan aad ula yaabay dulmiga yaala meeshaas iyo sida aysan cid aan wiilashaas Raamaha leh ee masaakiinta ah ka ahayni ugu maqnayn(jirkaygaa diiday in aan joogo) waxaa kaloon kasoo ogaaday in gurayaha masaajidka ka soo horjeeda oo hadda dowladu leedahay ay markii hore iska lahaayeen dad soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Reer Sayid mohamed Cabdile Hassan.
Walaal insha Allah cidkasta oo isku dayda in ay kuwan hoos gur-guurato way fashilmi, nasriga dadka islaamka ahina uu soo dhowyahay insha Allah…..qoraalkaagu wuxuu isoo xusuusiyay Ninkan koobka lasiinayo(ibraahin dheere) oo intuu 2000 oo qof hor fadhiyo ka sheekaynaya taariikhda magaaladda Harar, waxayna goobtu ahayd magaalada Minneapols ee maraykanka.
Inbadan Mahadi xagaaga ha ahaato walaal fadlan hana ka daalin in aad qoraalada caynkan oo kale ah sii wado insha Allah